Ukuxininisa Kwintetho: Ukunika Injongo Ngokugxininisa
Ukubonelela ngeenkcukacha kunye nenjongo ngokusebenzisa ukugxininiswa kwe-Phonetic
Kwi- phonetics , uxinzelelo lugxininiso lokugxininiswa lunikezwa isandi okanye isilagidi kwintetho , ebizwa ngokuba ngumxinzelelo wokuxinzelela okanye uxinzelelo lwegama. Ngokungafani nezinye iilwimi, isiNgesi sinezinto eziguquguqukayo (okanye eziguquguqukayo) . Oku kuthetha ukuba iipateni zoxinzelelo zinokukunceda ukuhlukanisa intsingiselo yamagama amabini okanye amabinzana athile okubonakala ngathi afanayo.
Ngokomzekelo, kwibinzana elithi "yonke indlu emhlophe," amagama amhlophe nendlu athola uxinzelelo olulinganayo; Nangona kunjalo, xa sibhekisela kwikhaya elisemthethweni lomongameli waseMelika, "iNdlu yeNdlu," igama elimhlophe lidla ngokugxininisa kakhulu kuneNdlu.
Ezi zintlukwano kwi-akhawunti yokuxinwa kweengxaki zesiNgesi, ngakumbi kulabo bafunda njengelwimi lwesibini . Nangona kunjalo, kuzo zonke iilwimi zonyanzeliso zisetyenziselwa ukwenza amagama aqondwe ngakumbi kumgangatho wegama kwaye kubonakala ngokukodwa ekubhaliweni kwamagama ngamagama kunye namalungu abo.
Imiba kwiNgxinxxwa kwiNtetho
Ingcinezelo ingasetyenziselwa ukugxininisa, kodwa kaninzi kunokuba isetyenziselwe ukunika intsingiselo kumazwi ngokubanzi kwaye inokubakho ukuxinwa kwegama elihambelanayo kwigama, ibinzana okanye amanqanaba omvakalisi.
Uxinzelelo lwezinga leZwi, njengoko uHarold T. Edwards ebeka "kwi-Applied Phonetics: Iintetho zesiNgesi saseMerika," ithonyelwa ngumongo kunye nomxholo wokuxinzelela ukuzisa intsingiselo. Usebenzisa umzekelo weengcinezelo ezimbini zegama elithi "irekhodi" ukubonisa le ngongoma:
Umzekelo, Siya kubhala irekhodi , amagama angamanye afanayo agxininiswe ngokuhlukileyo ukuze irekhodi lokuqala lugxininiswe kwisilayidi yesibini (ukunciphisa i-vowel kwisixhobo sokuqala sinceda ekunikezeni uxinzelelo kwisilayidi yesibini) , ngelixa irekhodi yesibini ligxininiswe kwisilayidi yokuqala (kunye nokunciphisa umbane kwi-syllable yesibili). Wonke amagama angaphezulu kwesinye isilagidi sinesiqulatho esivelele okanye sigxininisekile. Ukuba sichaza igama ngexinzelelo olufanelekileyo, abantu baya kusiqonda; ukuba sisebenzisa ukunyanzelwa koxinzelelo, siphepha umngcipheko wokungaqondwa kakuhle.
Ngakolunye uhlangothi, u-Edwards uyaqhubeka, ibinzana okanye ukugxininiswa kwinqanaba lomhlathi lisetyenziselwa ukugxininisa kwisici esithile sendawo ethile, apho ukugxininiswa kweefowuni kugxininisa abaphulaphuli kwizinto ezibalulekileyo kumyalezo.
Xa utshintsho lweelwimi lwenzeka ngokugqithiseleyo, ukusetyenziswa kwegama okanye ibinzana kummandla omnye, ngokukodwa njengoko kuhambelana namazwi kunye neengqungquthela ezixinzelelekileyo, inkqubo eyaziwa ngokuba yi- diffusion lexical ivela; Oku kubonakala ngokukodwa ngamagama asetyenziswa njengezibizo zombini kunye nezenzi, apho uxinzelelo luya kutshintshwa phakathi kwezixhobo ezahlukeneyo.
UWilliam O'Grady ubhala "kwiNkcazo yeeNkcazo: Isingeniso" ukuba ezininzi ezinjalo ezihlukeneyo zenzekile ukususela kwisiqingatha sokugqibela senkulungwane yeshumi elinesibhozo. Amagama afana nokuguqula, uthi, engasetyenziswa njengebizo okanye isenzi, utshintshile kakhulu ngeli xesha. "Nangona uxinzelelo lwaluqala kwi-syllable yesibili kungakhathaliseki ukuba luhlobo olunjani ... amagama anjalo, ukuvukela, ukungabikho komthetho, kunye nokurekhoda, kwachazwa ngokuxinzeleleka kwi-syllable yokuqala xa isetyenziswe njengezibizo."
Amawaka eminye imimiselo yendlela efanayo, nangona u-O'Grady ubonisa ukuba akukhona bonke abahlukeneyo ngegama lesiNgesi. Sekunjalo, amazwi afana neengxelo, impazamo kunye nenkxaso inika ubungqina kule ngcamango, kugxininisa ukubaluleka kokuxinezeleka kwiNgesi ethethwe ngentetho.
I-1899-1900 Indlala eNdiya
Iimpembelelo zeMfazwe yase-Iraq kuMbindi Mpuma
Indlela yokusebenzisa iincwadi ze-ABC Zonke iNdlela ngeSikolo esiphakamileyo